Nandeha tany Maurice, Mozambika ary Madagasikara i Papa Francis
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nandeha tany Maurice, Mozambika ary Madagasikara i Papa Francis
The Papa Katolika Francis'Fitsidihana firenena telo natomboka tany Mozambika ary hifarana amin'ny Nosy Maorisy. Ny papa farany nitsidika an'i Madagasikara dia i John Paul II 30 taona lasa izay.
Ny fitsidihan'ny Papa ny Nosy Vanilla sy Mozambika dia nampitombo ny fahitana ny faritra ary hanana ny hazavan'ny nosy hotsidihina mandritra ny volana maro.
Manodidina ny iray tapitrisa ny olona nivory tao amin'ny kianjaben'i Soamandrakizay eto an-drenivohitra ny alahady teo mba handre ny Papa Francis nanao fitenenana tamin'ny fizarana faharoa tamin'ny diany afrikanina firenena telo.
Ny vahoaka marobe dia niandry tamim-paharetana, nivelatra lavitra ny ora vao maraina, hahita ny papa, ny pontiff voalohany notsidihina tao anatin'ny 30 taona.
"Tombanan'ny mpikarakara fa manodidina ny iray tapitrisa ny olona," hoy ny mpitondra tenin'i Vatican.
Nilaza ny mpikarakara mialoha fa manantena mpanatrika iray tapitrisa eo ho eo izy ireo. Ny sasany nanoritsoritra azy ho toy ny fivoriana ampahibemaso lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'i Madagasikara.
Betsaka ny olona nanao satroka fotsy sy mavo voaravaka papa - ny lokon'ny Vatican, ary nihoby izy ireo rehefa namakivaky ny rahona feno vovoka mena nalain'ny rivotra nalaina avy teny amin'ny gorodon'ny kianja ny pop-mobile.
Nandritra ny fitsangatsanganana an-trano, ny pontiff Arzantina dia namporisika azy ireo “hanangana tantara amin'ny firahalahiana sy firaisankina” ary “amin'ny fanajana tanteraka ny tany sy ny fanomezam-pahasoavana izay mifanohitra amin'ny fanararaotana rehetra.”
Nanohitra ny "fomba fanao izay mitarika amin'ny kolontsain'ny tombontsoa sy ny fanilikilihana" izy ary nitsikera ireo izay mihevitra ny fianakaviana ho "fepetra mamaritra izay heverinay fa tsara sy tsara."
“Tena sarotra ny manara-dia azy (Jesosy) raha mitady hamantatra ny fanjakan'ny lanitra amin'ny fandaharam-potoananay manokana isika…… manararaotra ny anaran'Andriamanitra na amin'ny fivavahana mba hanamarinana ireo herisetra, fanasarahana ary famonoana olona mihitsy aza.”
Aorian'ny famotorana dia hamangy an'i Akamasoa, tanàna natsangan'i Mompera Pedro Arzantina, ny pontiff izay nanala ireo mpaka fako maloto an'arivony tamin'ny fahantrana.
Ny marainan'ny alahady maraina teo, tao amin'ny fiangonana Andravoahangy ao Antananarivo, dia nampahafantatra olona 5,000 ny pasitera Jean-Yves Ravoajanahary momba ny dia maharitra roa ora tokony hataon'izy ireo hahatongavana any amin'ny kianjaben'i Soamandrakizay.
“Hizara ny mpivavaka ho vondrona 1,000 izahay satria mampidi-doza tokoa ny arabe. Amin'izao fotoana izao, ny mpangarom-paosy sy ny bandy dia mivoaka amin'ny mug, "hoy izy.
Nanomboka ny diany tsirairay ireo vondrona, nifamotoana tao anaty hatsiaka sy nihira fiderana an'i Maria Virjiny. Nikatona ny fifamoivoizana.
Niala tao an-tranony i Hery Saholimanana tamin'ny vao maraina niaraka tamin'ny olona telo ao aminy.
"Matahotra ny ho tonga aho aorian'ny fetran'ny fidirana amin'ny 6:00," hoy ilay mpianatra IT 23 taona, nandeha haingana.
Rado Niaina, 29, dia nilaza fa efa lasa aloha kokoa aza, tamin'ny 2:00 maraina, noho ny tahotra “tsy hahita toerana”.
Betsaka no efa nanangana tranolay teo ivelan'ny tanàna ny zoma teo, norakofana sary afisy.
Prospere Ralitason, mpiasa tany iray 70 taona, tonga niaraka tamin'ny mpivahiny 5,000 teo ho eo avy ao afovoan-tanàna atsinanan'ny Ambatondrazaka, 200 kilometatra (125 miles) miala eo.
"Reraka izahay, fa mendrika ny hanaovana ireo fahafoizan-tena rehetra ireo ny mahita ny papa amin'ny masontsika manokana sy mandray ny tsodrano," hoy izy.
Tanora an'arivony - skoto indrindra - no nivory mba hiambina ao Soamandrakizay ny asabotsy, niandry ora maro tao anatin'ny hafanana ho avy i Francis.
"Eto aho mangataka ny tsodranon'ny papa hiatrika ny zava-misy iainana amin'ny fiainana, tsy fandriam-pahalemana, fahantrana ary kolikoly," hoy ny mpianatra 17 taona, Njara Raherimana.
"Izany rehetra izany dia manome fanantenana ho an'ny fanovana eto amin'ny fireneko," hoy ny feo navoakan'ny mpianatra mpiara-miasa, Antony Christian Tovonalintsoa, ​​izay mipetraka eo amin'ny sisin'ny renivohitra.
Nandritra ny fiambenana dia nidera ny "fifaliana sy hafanam-po" an'ny vahoaka mpihira ny Papa Francis.
Namporisihiny ny tanora mba tsy hianjera amin'ny "mangidy" na hamoy fanantenana, na dia tsy nanana ny "farafahakeliny ilaina" azony natao aza izy ireo ary rehefa "tsy ampy ny fotoana fanabeazana."
Ny sabotsy teo dia nanao fitalahoana mahery vaika ho an'ireo madagasikara i Francis mba hiarovana ny tontolo tsy manam-paharoa an'ny Ranomasimbe Indianina amin'ny “fanimbana ala be loatra.
Herinandro taorian'ny fitomboan'ny hain-trano tany Amazon, dia nilaza tamin'ny mpampiantrano azy ny pontiff Arzantina fa tokony “hamorona asa sy asa fitadiavam-bola manaja ny tontolo iainana ary manampy ny olona handositra ny fahantrana.”
Madagasikara - malaza amin'ny karazan-javamaniry sy zavamaniry maro karazana - dia fonenan'ny olona 25 tapitrisa, ny ankamaroany dia miaina anaty fahantrana amin'ny fidiram-bola latsaky ny roa dolara isan'andro.
Maherin'ny antsasaky ny tanorany no tsy miasa, na dia maro aza no manana mari-pahaizana tsara.
Ny papa farany nitsidika an'i Madagasikara dia i John Paul II 30 taona lasa izay.
Nitsidika an'i Mozambika tamin'ny fiandohan'ny herinandro ihany koa i Francis, ary tokony handeha ho any amin'ny nosy Mauritius ny alatsinainy.
Nanangana fampielezan-kevitra hampianarana ny mpitsidika ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii